Webflow: Volavola, Prototype ary fandefasana Dynamic, tranokala mandray andraikitra | Martech Zone
Webflow: Volavola, Prototype ary tranokala Dynamic, Responsive
Alahady, Aogositra 14, 2016 Douglas Karr
Zavatra efa lasa taloha ve ny fanaovana tariby? Manomboka mieritreritra aho fa toy ny onja vaovao WYSIWYG tsy misy kaody, manonta ny tsena ireo tonian-dahatsorin'i drag and drop. Ny rafitra fitantanana atiny izay mampiseho fahitana iray any ambadika ary ny iray eo amin'ny farany dia mety ho lany andro. Eny… angamba ny WordPress raha tsy manomboka manenjika izy ireo.
Maherin'ny 380,000 ny mpamorona nanangana tranokala 450,000 XNUMX miaraka Webflow. Fitaovana famolavolana tranonkala, rafitra fitantanana atiny, ary sehatra fampiantranoana iray ao anaty iray. Midika izany fa ny mpamorona dia mamolavola ny kaody miaraka amin'ny fotoana iray ihany - ary ny valiny dia nohavaozina ho azy ho an'ny fametrahana mora setrika.
Ny endri-tranonkala dia misy:
Mpamorona Codeless - Webflow dia manoratra kaody madio sy maody ho anao hahafahanao mifantoka amin'ny endrika. Atombohy amin'ny lamba tsy misy banga mba hifehezana tanteraka ny famoronana, na misafidiana modely iray hanombohana haingana. Miaraka amin'ny drafitra Premium azon'izy ireo, azonao atao ny manondrana ny HTML sy CSS mora ampiasaina araka izay itiavanao azy.
manaiky Design - Miorena mora foana amin'ny endriny manokana ho an'ny birao, takelaka ary finday (sary sy sary). Ny fanovana endrika rehetra dia ataonao cascades amin'ny fitaovana kely kokoa ho azy. Raiso ny fifehezana ny breakpoint rehetra, ka ny pixel anao dia toa lavorary pixel amin'ny fitaovana rehetra.
Sarimiaina sy fifandraisana - Ento amin'ny tsindry, amin'ny hover, ary amin'ny fifandraisana amin'ny enta-mavesatra fa tsy misy kaody miaraka amin'ny sarimiaina izay hiasa tsara amin'ny fitaovana rehetra sy amin'ny browser rehetra maoderina.
Ireo singa namboarina mialoha - Ny fitetezana, ny slider, ny tab, ny form ary ny lightboxes dia namboarina mialoha, mamaly tanteraka ary ampidirina miaraka amin'ny fahafaha-misambotra fitarihana sy valiny avy ao anaty boaty.
Ecommerce sy fampiraisana - Ny fampidirana am-bokatra dia ahitana ny Zapier sy Mailchimp. Amboary ny fivarotanao fivarotana ary tantano ny sarety fiantsenana sy ny fandoavam-bola miaraka amin'ny fitaovan'ny antoko fahatelo toa ny Shopify.
Templates - Misafidiana amin'ny mihoatra Modely 100 momba ny orinasa, portfolio ary bilaogy azonao ampanjifaina ao anaty Webflow.
Hosting sy backup - Mampiasà sehatra manokana ampiarahina amin'ny backup automatique sy manual, ny fanaraha-maso ny fiarovana, ny fametrahana ary ny tahiry famokarana, ary ny haingam-pandeha mavesatra pejy.
Tutorials - Webflow's fanampiana foibe manolotra taranja maro hanombohana anao sy fampianarana lalindalina kokoa hanampy anao, miaraka amin'ny forum sy atrikasa.
Misoratra anarana amin'ny kaonty Webflow maimaim-poana
Tags: CMSprototype ecommercenitranga fahinymanaikymanaiky Designprototype modelyprototyping mamalyshopifyfikorianan'ny tranonkala